Baahin: Axad, Jun 26, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Munaasabado lagu maamuusay xuska 26-ka June oo ka dhacay gobollada Somaliya aan ka ahayn Somaliland; Taariikh-nololeedka Dambi-baare C/salaam Cali Saylaan oo lagu dilay Galkacyo; D/Sare ee Manaaratul Baydaa ee Bossaso oo qaaday koobka kubadda cagta ee Dusgiyada Sare ee Puntland; Warbixin ku saabsan weerar xalay lagu qaaday fariisin ciidanka Somaliland ay ku leeyihiin duleedka Widhwidh. – Radio Daljir
Juunyo 26, 2011 12:00 b 0
Meydka labo nin oo gawracan oo lagu arkay buundo-jiifka tuulada Yalho ee gobolka Bari.